» ओली गुटमा लफडाः आफ्नैहरु भिड्न थालेपछि बालुवाटारमा तनाब
२०७९ जेठ १५, आइतबार
ओली गुटमा लफडाः आफ्नैहरु भिड्न थालेपछि बालुवाटारमा तनाब
२०७८ असार १, मंगलवार ०९:४९
काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समुहमा लामो समयदेखि सुसुप्त अवस्थामा रहेको लफडा एकाएक पटाक्षेप हुन थालेको छ । यसअघि महासचिव ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, शुभाष नेम्बाङ, शंकर पोखरलहरुका बीचमा तिब्र प्रतिष्पर्धा थियो र त्यो सुसुप्त अवस्थामा थियो । तर यसपाली ओलीको उत्तराधिकारी बन्ने दौडदेखि दोश्रो र तेश्रो पुस्तासम्मै पद र शक्तिको लडाई छताछुल्ल भएको छ ।
महासचिव पोखरेललाई विनाविभागिय उप प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बढुवा गरि उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि ओलीले सम्भावित उत्तराधिकारीका रुपमा पौडेललाई अघि सारेको रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ । त्यसो त सुभाष नेम्बाङ त्यहि खडा छन् । उता, शंकर पोखरेलले ओलीपछि आफुलाई खास उत्तराधिकारीका रुपमा अघि सार्नुपर्ने अडान ओली सामु राख्दै आएका थिए । तर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा खुम्चिनु पर्दा पोखरेल पनि केन्द्रिय राजनीतिको प्रमुख जोड घटाउबाट अलि परै बस्न बाध्य भएका छन् ।
लुम्बिनीमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको लडाई झनै पेचिलो थियो र त्यो अझै कसिलो बन्दै गएको छ । ईश्वर पोखरेल, शुभाष नेम्बाङ, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलहरुको लफडा मिलाउन मुस्किल परिरहेका बेला ओलीलाई अर्काे बज्रपात आईलागेको छ ।
तेश्रो पुस्ताका रुपमा हेरिएका भानुभक्त ढकाल, विष्णु रिमाल, खगराज अधिकारी, राजन भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, कर्ण थापा र महेश बस्नेतहहरुको लडाईले ओली क्याम्पमा अर्काे संकट आईलागेको छ ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारमा कर्ण थापा, गोकुल बास्कोटा, खगराज अधिकारी र महेश बस्नेतले गृह मन्त्रालयको दावी गरेका थिए । बस्नेतलाई बनाउने मोटामोटी सहमति पनि बनेको थियो । तर एकाएक शंकर पोखरेल, भानुभक्त ढकाल, विष्णु रिमाल र राजन भट्टराईहरु एकजुट भए र बस्नेतको नाम मेटेर कास्कीका खगराज अधिकारीलाई गृहमन्त्री बनाए । बस्नेतलाई रोक्न शंकर पोखरेल, भानु ढकाल र राजन भट्टराईहरुले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी मार्फत ओली सामु दबाव बढाएको श्रोत बताउँछ ।
बस्नेतले गृहमन्त्रालय गुमाएपछि उनी निकट युवाहरुले सामाजिक सञ्जालमै आक्रोश पोखेका थिए । बस्नेत आफैले पनि बालुवाटारमा सल्लाहकारहरुको घेराबन्दीले आफुलाई गृहमन्त्री बन्न रोकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईसकेका छन् । पछिल्लो समय बस्नेतको उदयलाई रोक्न शंकर पोखरेल, भानुभक्त ढकालदेखि गोकुल बास्कोटा हुँदै कर्ण थापा र राजन भट्टराई एक जुट भएका थिए ।
माधव नेपाल कहाँ धाउँदै मन्त्री छाडेकाहरु
ओलीले मन्त्रीबाट निकालेका अधिकांश नेताहरु यतिबेला बरिष्ठ नेता माधव नेपालको निवास धाउन थालेका छन् । उनीहरु पार्टी मिलाउनु पर्यो भन्दै नेपाल निवास जान थालेका हुन् । ओली क्याबिनेटमा बसेर काम गरेकाहरु ओलीको कार्यशैलीबाट उभो नलागिने निष्कर्षसहित नेपाल निवास पुगेर पार्टीको मुल नेतृत्व गरिदिन आग्रह गर्न थालेका हुन् । उनीहरुले नेपाललाई भेटेर ओलीको कार्यशैलीले देशलाई डुबाउने बताउन थालेका छन् । मन्त्रिपरिषदमै पनि आफुहरु ओलीका कारण आजित भएको गुनासो बरिष्ठ नेता नेपालसामु पोखिरहेका छन् ।
पूर्व माओवादीमा अनेकतासँगै असन्तुष्ठि
पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु बादल, टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मणी थापाहरुकै बिचमा पनि फाटो आउन थालेको छ । ओलीले पनि पूर्व माओवादी नेताहरुबाट अपेक्षा अनुसारको राजनीतिक लाभ लिन नसकेको निष्कर्ष सुनाउन थालेका छन् । पूर्व माओवादी नेताहरु ओलीले आफुहरुलाई धोका दिएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा समेत पुगिसकेको श्रोत बताउँछ ।
संसदमै सर्वोच्चको चरम आलोचना, ठूला नेताले नै गरे विकास विरोधि अदालती फैसला पुनरावलोकनको माग
४५ दिनभित्र अभिकर्ता कर्जा असुली नगर्ने जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तार समितिले रोक्ने
नेपालमै पेट्रोल उत्पादन गर्ने लक्ष्य २ वर्ष धकेलियो, यसकारण भएन समयमै काम
संस्थानमा सरकारी लगानीको बेहाल, सेयरको २% मात्र प्रतिफल ! (५ वटाले मात्र बुझाए लाभांश)
अझै ६ प्रतिशत नेपाली टुकीकै सहारामा
सरकारले चिन्यो २ लाख २७ हजार गरिब परिवार, बाँकी कहिले चिन्ला ?
ओलीको ३ घन्टाको प्रश्नलाई देउवाद्वारा २३ मिनेटमै सटिक जवाफ (बुझ्नका लागि यहाँ छ पूर्णपाठ)
४४ मध्ये २४ वटा नाफामा, यी हुन् बढी नाफा गर्ने ‘टप फाइभ’ संस्थान (कसको कति ?)
झन् बढ्यो सार्वजनिक ऋण, हरेक नेपालीको थाप्लोमा ६३ हजार रूपैयाँ
खेर जाँदै सरकारको लगानीः संस्थानहरूको कुल नाफा २५ अर्ब रुपैयाँले घट्यो
यस्तो आयो आर्थिक सर्वेक्षण (कार्यकारी सारांश)